Ihe dị iche n’etiti ndị na-eswerịrị ihe na ndị na-esiri infrared
Thekpụrụ ọrụ nke onye na-esi nri infrared: mgbe ọ kpoo ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ (nickel-Chromium metal kpo oku), ọ na-etolite arụmọrụ dị elu na nso infrared ray. Site na arụmọrụ nke mpempe akwụkwọ microcrystalline, a na-emepụta ray ray infrared dị elu dị irè. Ogwe ọkụ ahụ kwụ ọtọ, t ...
China malitere imepụta ihe eji esi nri na 1980s, mgbe ihe ruru afọ 30 nke mmepe, ụlọ ọrụ na-esi nri na-eme ka mmepe mmepe na-aga n'ihu, onye na-esi nri na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ ndị mmadụ. Na 2005, ụlọ ọrụ na-esi nri nke China toro rap ...
Na kichin, onye na-esi nri bụ otu n'ime ngwa efere kichin nke a na-ahụkarị. lee anya nke ọma! Kwee ...
N’afọ 2014, amor chịkọtara ihe kpatara esi esi nri wee mebie ọnọdụ kwụsiri ike. Na 2016, amor etinyela ikike patenti 48. Na 2020, amor emeela ka ihe ọkụ ọkụ na-eme ka anyanwụ na anyanwụ na infrared. Ọrụ ụlọ ọrụ Enwere mmemme mgbasa ozi abụọ kwa afọ.Amor ga -